Grade7Education | Myanmar Tech Press
ကလေးများအိမ်မှာနေရင်းစာသင်ယူနိုင်သည့် KG တန်းမှ Great 11 အထိ သင်ရိုးများအကြောင်း (၇)
2021-07-09 2021-07-14 Admin education
ကျောင်းမသွားတဲ့ ကလေးများမိမိအိမ်မှာနေရင်းစာသင်ယူလို့ရနိုင်ရန်အတွက် KG တန်းကနေ Great 11 အထိ သင်ရိုး Link တွေ ထုတ်ပြန်ထားပါရှိပါတယ်။ အခုသင်ရိုးကတော့ Grade ၇ တန်းတွေအတွက် ဖော်ပြပေးထားတဲ့ သင်ရိုးဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြား ရေးလမ်းညွှန်ဆရာ၊ ဆရာမတွေအတွက်လည်း အကျိုးရှိစေမှာ အမှန်ပါပဲ။
ကလေးအတွက် ဗဟုသုတရဖွယ်စာအုပ်များကို ဖတ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ် ။ စာသွားဖတ်လို့ ပြောတာထက် စာဖတ်ချင်အောင်ပြော ပေးပါ။ စာရေးခိုင်းခြင်းကြောင့် ကလေးရဲ့လက်ရေး ၊ စာရေးခြင်းအပေါ်စိတ်နှစ်ထားနိုင်ခြင်းကြောင့် စာရေးတဲ့အခါအမှား နည်းတဲ့အလေ့အကျင့်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စာရေးတဲ့အခါအမှားနည်းအောင် သပ်ရပ်အောင်ရေးနိုင်ခြင်းဟာ အတန်းကြီးလာတာနဲ့အမျှ အရေးပါလို့ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ သိပ္ပံ ပထဝီ သမိုင်း စာရိတ္တ ဘဝတွက်တာ ဘာသာရပ်များကို ကလေး ကို ဖတ်စေပြီး ဆွေးနွေးမှု မေးခွန်းများဖြင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါ Link တွေမှာ ကျောင်းသားကိုင်ဖတ်စာအုပ်နှင့် ဆရာကိုင်စာအုပ်များ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ down မရရင် ဒီကကြည့်ပေးပါ။
G7 သချာၤ(၁) ကျောင်းသားကိုင်
G7 သချာၤ(၁) ဆရာကိုင်
G7 သချာၤ(၂) ကျောင်းသားကိုင်
G7 သချာၤ(၂) ဆရာကိုင်
Grade7English သတ္တမတန်း သင်ရိုးသစ်
အင်္ဂလိပ်စာအသံဖိုင်များလိုချင်ရင် အောက်တွင်ပေးထားသော link များမှ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း zip file ဖြင့် Download ရယူလိုပါက အောက်က link မှ ရယူနိုင်ပါတယ်….
zip ဖြည်ဖို့ အခက်အခဲ ရှိသူများ အသံဖိုင်လ် တစ်ခုချင်းစီအား Download ရယူလိုပါက အောက်တွင်ပေးထားသော link မှ ရနိုင်ပါတယ်။
စာအုပ်နဲ့ audio တွေ Link ပျက်သွားရင် အောက်ပါ Link ကဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Source .. Ministry of Education Myanmar and Hanni Linn Facebook
သင်တန်းတက်ဖို့ …. “Coursecom”
ကျောင်းသုံးရုံးသုံးအတွက် အဆင်ပြေလွယ်ကူစေတဲ့ Smart Myanmar Notebook
Telenor ၏ Gift of Learning လေ့လာသင်ယူမှု အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် ကျေးလက်ဒေသရှိ အခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းများအတွက် ကျပ်သန်း ၂၀ မတည်
Synapse Original က COVID-19 ကာလအတွင်း အခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်း၌ TikTok ကမ်ပိန်းများပြုလုပ်နိုင်မည့် အချက် ၁၀ ချက်ကို ဝေမျှ
← MPT Pay သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းပေးခြင်းနှင့် ငွေပေးချေခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို KBZ Mobile & Internet Banking မှတစ်ဆင့် ငွေသွင်းနိုင်
မြန်မာပြည်တွင်း ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ တယ်လီနော မြန်မာ ကို M1 လုပ်ငန်းစု သို့ရောင်းချ →
NUG မှ ကြားကာလပညာရေးအစီအစဉ်အနေဖြင့် Software Development သင်တန်းအပါအဝင် အခြားသင်တန်းများဖွင့်လှစ်
APN Content Creation မှ Digital Content Marketing သင်တန်း Batch-9 ကို အွန်လိုင်းမှဖွင့်လှစ်
HUAWEI WATCH3Pro ၏ အသေးစိတ်လုပ်ဆောင်ချက်များအကြောင်း
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လကုန်အထိ မြန်မာပြည်တွင်းစမတ်ဖုန်းဈေးနှုန်းများ
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လကုန်အထိ မြန်မာပြည်တွင်း ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများ၏ ဖုန်းအင်တာနက် Package များ